The Outlaws (2017) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Not Rated 2017 121 min Action, Crime
Choi Gwi-hwa, Heo Dong-won, Jin Sun-kyu, Jo Jae-yoon, Kim Sung-kyu, Lim Hyung-jun, Ma Dong-seok, Yoon Kye-sang
ချိုင်းနား​တောင်း ဂါရီဘွန်​ရပ်​ကွက်​ !
ဒီရပ်​ကွက်​ဟာ တရုတ်​-ကိုရီးယား ကပြား​တွေ စု​ပေါင်း​နေထိုင်​တဲ့​နေရာ​လေးတစ်​ခု… ဒီရပ်​ကွက်​မှာ ကပြားဂိုဏ်းစတား​တွေက ကိုယ်​စီကိုယ်​စီ ဂိုဏ်း​တွေထူ​ထောင်​ပြီး သူ့​အပိုင်​နဲ့ သူ အုပ်​ချုပ်​ကြတယ်​…သူတစ်​လူ ငါတစ်​မင်းဆိုပါ​တော့…
ဒါ​ပေမဲ့ လက်​သံ​ပြောင်​တဲ့ စုံ​ထောက်​မားကို​တော့ သူတို့အကုန်​လုံး ​ကြောက်​ကြရတယ်​…
တစ်​​နေ့မှာ​တော့ တရုတ်​က​နေ ခိုးဝင်​လာတဲ့ ဆရာသမား​တွေ​ရောက်​လာတယ်​… လာတာ​က ဆရာရယ်​ တပည့်​နှစ်​​ယောက်​ရယ်​ …
ဆရာနာမည်​က ဂျန်​ချန်း တဲ့ !
​သွေး​အေးတယ်​… ရက်​စက်​တယ်​… ပိုက်​ဆံရဖို့အတွက်​ဆိုရင်​ လက်​မရွံ့ဘူး… သူ့တပည့်​ ၂ ​ယောက်​ကလည်း သူ့ဆရာအတိုင်းပဲ … ဒီ​ကောင်​​တွေ ၃ ​ကောင်​က ဂါရီဘွန်​ရပ်​ကွက်​​လေးထဲ ​ရောက်​လာတယ်​… အဲ့ဒီမှာ ဆရာ​ကောင်​​တွေကို ​ရှော့ပြီး သူတို့​တွေရဲ့ ​နေရာကို ဂျန်ချန်းတို့ ဆရာတပည့်(၃)ေ​​​​ယာက်​က အပိုင်​စီးလိုက်​တယ်​… ဒီရပ်​ကွက်​မှာ ​ရောင်းသမျှ ​ဈေးသည်​တိုင်းက သူ့ကို အခွန်​​ပေးရတယ်​… ​နောက်​ပိုင်း ဂျန်​ချန်းက တပည့်​​တွေ​မွေးပြီး သူ့တပည့်​​တွေကို လတိုင်း ​ဆက်​​ကြေးလိုက်​​ကောက်​ခိုင်းတယ်​…
ဆို​​တော့ကာ အဲ့ဒီမှာ ဂျန်​ချန်း နဲ့ စုံ​ထောက်​မား တို့ ငြိကြ​ပြီ​လေ…
ခိုးဝင်​လာတဲ့​ကောင်​​တွေက သူ့နယ်​ထဲမှာ သူ့နားရွက်​ကို တံ​တွေးလာဆွတ်​​တာ​… လွှတ်​ထား​ပေးရင်​ မားဆူဒူး(စုံ​ထောက်မား)​ရဲ့ ရာဇဝင်​ရိုင်းသွားမှာ​ပေါ့..
စုံ​ထောက်​မား နဲ့ ဂျန်​ချန်းနဲ့ ဘယ်​လို​တွေ ထပ်​တိုက်​​တွေ့ကြမလဲ… ဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​ကြမလဲဆိုတာ ဒီကား​လေးထဲမှာ ဆက်​ကြည့်​ကြပါ …​နောက်​ပိုင်းဇာတ်​ဝင်​ခန်း​တွေကိုက ကြည့်​ရတာ အသည်းတထိတ်​ထိတ်​ ရင်​တဖိုဖို (အယ်​လယ်​ ? အဲ့သလိုကို ညွှန်းပလိုက်​တာ ?)
Choi Gwi-hwa Heo Dong-won Jin Sun-kyu Jo Jae-yoon Kim Sung-kyu Lim Hyung-jun Ma Dong-seok Yoon Kye-sang